Kedụ ka m ga-esi eji ejiji maka njem igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ugbo ala igwe kwụ otu ebe - chọọ ihe ngwọta
Ugbo ala igwe kwụ otu ebe - chọọ ihe ngwọta
Kedụ ka m ga-esi eji ejiji maka njem igwe kwụ otu ebe?
Dị ka ndị bụbu ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ ga-abụrịrị na anyị jiri oge karịa lycra karịa anụ ọhịa bea na-eche banyere ya - yup, yana obere uwe mwụda na uwe mwụda na uwe ndị ọzọ niile siri ike dị mma maka ịnya ọzụzụ ogologo oge, oge ụfọdụ lycra bụ naanị ' Nke ahụ Bụrụ na ọ zaghị - Ee e, ọ bụghị maka ịgba ịnyịnya ígwè n'obodo. Eleghi anya ị na-anya nwayọ, ị naghị aga njem tere aka, ma ọ bụ, ikekwe nke ka mkpa, ị nwere ike ịdị ka onye nwere ezigbo mma oge ị ruru ebe ị na-aga ma enweghị ebe ị ga-agbanwe uwe gị - yabụ ka anyị lelee anya na ụfọdụ uwe nhọrọ ndị ị nwere maka ịnyịnya ígwè na obodo. (upbeate Tekno music) - cgba ígwè bụ ụzọ dị mma iji wee gafere obodo.
Ọ na-agbakarị ọsọ ọsọ karịa ịnya ụgbọ ala, ị na-ewere obere ohere n'okporo ụzọ, ma n'ezie ọ dịghị emerụ ma ọlị. Gba ịnyịnya ígwè bụ ihe mgbanwe karịa ọha iga na ọ bụ mma n'ihi na ọ bụ mmega na anyị niile nwere ike iji a obere ihe nke ahụ, nri? - Mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè n’obodo, ụfọdụ n’ime anyị nwere ike ọ gaghị achọ ịdị ka ap ro, anyị nwere ike ọ gaghị achọ ịgagharị na ngwa ahịa na-eyi lycra n’ụzọ. N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịchọrọ ịla ebe anyị na-aga n'ụzọ dị jụụ, nke dị jụụ, na nke dị nchebe - gịnị ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala ị na-arụ ọrụ n'obodo? Igwe kwụ otu ebe mgbe ahụ ị naghị emega ahụ, ma ọ bụrụ na ị mee ya iji chekwaa oge mgbe ahụ ị chọghị ịsa ahụ ma gbanwee uwe mgbe ị ruru ọrụ.
Ikwesiri inwe ike ịgbanwe site na igwe kwụ otu ebe gaa n'ọfịs ma laghachi na igwe kwụ otu ebe. Yabụ ịchọrọ uwe gị ka ọ rụọ ọrụ ma dịgide, mana bụrụkwa ọmarịcha mma. Ugbu a nchekwa ga-adị oke mkpa n'ihi na obodo juputara n'ụgbọala na ndị mmadụ, ịnya ụgbọ ala nwere ike ịtụ ụjọ ma na-atụ ụjọ. ọbụna dị nnọọ ize ndụ nye ndị na-agba ịnyịnya ígwè.
Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị mgbe mgbe, ma otu n’ime ihe ndị akacha akpọrọ ihe mere ndị mmadụ achọghị iji igwe kwụ otu ebe na obodo bụ na ha na-atụ egwu nke ụgbọala. Yabụ nọrọ n'akụkụ nchebe Ma ị ga-eji ọkụ wee mee nke ahụ ma ọ bụ jiri agba na-enwu gbaa na uwe gị, dịka ọmụmaatụ, sọks Fluro, Fluro overshoes, Fluro vest. A na-ahụkarị agba ndị na-enwu gbaa, nchọpụta e mere na-egosipụtakwa na ọ bụ ọmarịcha agba, ihe ndị na-atụgharị uche na ìhè ka ọ na-eme ka akụkụ ahụ mmadụ na-agagharị agagharị.
Dịka ọmụmaatụ ikpere na nkwonkwo ụkwụ. - Akpụkpọ ụkwụ. Ugbu a, ọ bụrụ n'ịchọrọ iji obere mkpịsị ụkwụ, ị ga-achọ ụdị dị iche iche igwe kwụ otu ebe.
Yabụ ịkwesịrị iyi akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe, nke pụtara na ị nwere ike ịpụ na igwe kwụ otu ebe ma jee ije ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eji pedal mgbe niile dị ka ndị a, ị nwere ike ịhapụ steam. Naanị ihe ị ga-eburu n’uche bụ na mkpịsị ụkwụ mepere emepe, dị ka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ flip flops, nwere ike ịdị ntakịrị ihe ize ndụ.
Y’oburu n’inwe obi ojoo iburu onye ogba aghara ma oburu na ino n’igwe gi ka ichichaa mkpisi mkpisi aka gi mgbe abrasion biara, o na ewute gi nke ukwuu, obughi ikwuputa ya bu ihe nkpasu iwe ichere ichere ka ha di ike ka i gha n’aghaghachi iyi uwe gi. akpụkpọ ụkwụ nkịtị. Nke ahụ kwuru, sị, ọtụtụ n'ime anyị na-etinye ihe egwu ahụ.- Ma enwere ike idi ike.
Ejila akwa ma ọ bụ uwe kachasị mma gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ nke ọzọ, ọ ga-abụ na ị ga-ezere ihe ọ bụla chọrọ ịsa aka gị ebe ọ bụ naanị na ị ga-arụ ọtụtụ ọrụ. N'ikpeazụ, uwe ọcha. Agaghị m eme ya n'ihi na n'okporo ámá na wiil ndị mara mma ma ọ bụrụ na ị gbara ha gburugburu mgbe niile, ọ naghị ewe oge tupu uwe ndị ọcha dị ka nke ahụ.
Nkasi obi. Ọbụna mgbe ịgba ịnyịnya ígwè, nwayọ pụtara na ị nọ na Punch gị butal na pedal. Yabụ, uwe na-esiwanye ike ma ọ bụ na-enweghị onwe ya, na-ekpo oke ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oyi agaghị adị mma, ọ dị mma? Ya mere, anyị nwere ndụmọdụ ole na ole kachasị elu maka gị - Uwe ọkpa gị kwesịrị ịbụ nke zuru oke ma ọ bụ gbatịkwuo ka ị wee nwee ike iru ụkwụ na nkasi obi nke kachasị mkpa, na-agbanye ụkwụ gị n'elu igwe kwụ otu ebe.
Ma mgbe ahụ naanị ihe ọzọ ị ga - ele anya bụ ụkwụ aka nri gị - ị nwere ike iji obere mkpirisi jide ya, ma ọ bụ tụgharịa ya ka ọ ghara ịbanye n'ụzọ nke agbụ gị ebe m na - Achọrọ otu maka enweghị agbụ. - nịịka bụ ihe ngwọta zuru oke n'echiche m, ma ị gara maka nhọrọ lycra ma ọ bụ akpa. Ihu ọma enwere mgbe nnwere onwe ịgagharị, ha na-eme gị obi umeala ma ghara ijide gị na draịva mbanye.
N'ụzọ dị ịtụnanya, uwe mwụda ziri ezi nwere ike ịbụ uwe mara mma maka ịgba ígwè. Uwe mwụda ma ọ bụ nke siri ike nwere ike ọ bụghị n'ihi na ha anaghị ata ahụhụ ma na-ekpughe. Ma uwe mwụda sara mbara karị nwere ike ime ọtụtụ Hapụ ohere ka ị zọpụ ụkwụ, na n'ezie ị nwere ike ịmịnye akwa azụ ahụ n'úkwù ihu iji debe ugwu gị.
Ezi ndi Scots, biko mara kwa. Maka uwe mwụda ogologo, na-asọ asọ, gbaa mbọ tụọ ya n'ụzọ, ebe ị kwụgidere ya n'azụ ụkwụ ma ọ bụ breeki nwere ike bụrụ ihe dị egwu - njigide na-esote bụ uwe ime gị. O doro anya na okwu dị ezigbo mkpa dịka ọ bụ akwa uwe dị na akpụkpọ ahụ gị, chọta ihe dị mma, ọ bụghị nke wrinkled ma ọ bụ c hafe.
Isi okwu dị elu bụ na ịnwere ike ịnweta uwe mwụda nwere mpempe akwụkwọ, nke yiri nke ahụ na-agba ịnyịnya ígwè gị mgbe niile, yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-eyi, gịnị ma ị ga-enyocha ha - ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè, ị nọ n'èzí na nke ahụ bụ otu n’ime ihe ukwu banyere ya. Ma, ọ na-eweta nsogbu. Ọ dị mkpa ịgbanwe uwe gị dabara nke ọma - Ee, na ihu igwe ọkụ ọ kacha mma ka ị yikwasị uwe elu ma gbanye uwe elu ọfịs ma ọ bụ uwe elu nwanyị mgbe ị ruru ebe ahụ.
Ọsụsọ na-eme ka a ghara izere ya na okpomọkụ ma ọ bụrụ na uwe gị ga-agbada n'okpuru akpa gị. Ya mere, debe ha ruo mgbe ị ga-arụ ọrụ. - Ee, na mgbe ihu igwe na-atụ oyi, ọfụma, enwere nnukwu jaketị na-agba ịnyịnya igwe nwere ma ọmarịcha nkecha na ifufe na mmiri na-eguzogide ọgwụ.
na-eme ka ọsụsọ na-ebelata ọbara mgbali elu
Ugh, mmiri ozuzo bu nsogbu nke ndi njem obula, yi ogologo ogologo ogologo mmiri iji chebe onwe gi, ma obu nabata na ukwu na ukwu gi ga-esi na mmiri, ma weta obere uwe na akpụkpọ ụkwụ maka ọfịs. Ugbu a ụbọchị ndị a, ịgba ịnyịnya ígwè na-enweghị mmiri nwere ike ịdị mma ma maa mma na ọkara nke elu gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịga poncho, nke nwere ike ọ gaghị adị oke mma, mana ọ ga-echekwa karịa gị na mmiri. (egwu dị egwu) Ihe ndetu pụrụ iche nye ndị nwe ala ebe a.
Biko jiri eriri n'úkwù gị ma ọ bụ jiri eriri mee ihe ma ọ bụ na ị ga-ejedebe na onye na-ewu ụlọ na-eme ihe n'eziokwu na ọ dịghị onye ga-achọ ịhụ nke a. Ndo.- Mba, ị bụghị. - Mba, ha anaghị.- Oh, ndo, gbaghara.- Ihe ndetu pụrụ iche nye ụmụ nwanyị.
Nwere ike ịtụle akwa akwa akwa ma ọ bụ elu n'ihi na ụfọdụ ndị chọrọ ịhụ nke a ma ị nwere ike ịdị mma igosi, mana ọ bụ ihe egwu na nsị na a beụ. Ma kwere m, na-ekwu okwu site na ahụmịhe, nke a abụghị ihe na-atọ ọchị. Ka anyị nwee olileanya na isiokwu a ga - enyere gị aka inwe ahụ iru ala ịnyagharị n’obodo ahụ, mana ọ ga - adịkwa mma ma ị bụ onye na - agba ịnyịnya ígwè nke na - anaghị akwụsị ịbụ onye na - agba ịnyịnya, ọbụlagodi na igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ onye na - agba ịnyịnya igwe, mana achọghị ka ọ dị ka onye na-agba ịnyịnya. .- Obi na jụụ.Okay, ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ ile ọzọ isiokwu banyere obodo anyịnya igwe ebe a na GCN, ị nwere ike pịa ụzọ gị ala ebe anyị nwere anyị n'elu Atụmatụ maka gị.
Kedu ihe ị na-eyi igwe kwụ otu ebe?
Ọtụtụ mmadụ na-a swearụ iyi site na akwa ajị anụ dị fechaa, dị ka ajị anụ na-eku ume karịa owu. Chọrọ akwa dị n'ime nke na-anaghị ahapụ gị ịmịkọrọ mmiri na oyi wee zere owuuwe. Ihe kachasị mkpa bụ ka mkpịsị ụkwụ gị na ụkwụ gị na-ekpo ọkụ mgbe niile. Ana m agba ịnyịnya ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọ bụla nwere oyi.
Kedu ihe m kwesịrị iyi maka ịgba ịnyịnya ígwè nkịtị?
Abụ m Onye edemede Ejiji OnyeBikesN'ebe nile - & Nke a bụ ihe mYiri uwe
Igwe kwụ otu ebeOgologo.
Obere obere akpa.
A Nnukwu akpa (Nke ahụ nwere ike ibi n'ime obere akpa ahụ ruo mgbe ịchọrọ ya)
Loose ogologo ọkpa.
Jaketị Na-enweghị Mmiri Na-ekpuchi Butt Gị.
Akpụkpọ ụkwụ Na-anọ.
Jul 17. Dec 2019
Uweelu gịigwe kwụ otu ebe-nke na-achagharị anya site na ịtinye akwa ma ọ bụ jaket mara mma nke dị n'elu tee na uwe mwụda denim. Jiri uwe mwụda na-adọrọ adọrọ, ma debe ha ahaziri site na ịgbagharị ụkwụ gaa n'elu nkwonkwo ụkwụ. Jiri nlezianya na-eme ka ihe ngosi dị elu maka ịrịọ elu.Jul 18 2018 Nov.
I nwere ike ida abụba afọ site na ịgba ígwè?
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụba ọnwụma kwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-eme aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Ogologo oge 1 ọ na-aga ogologo oge?
Na okporo ụzọ, ọ nwere ike ịbụ1. 1-aka elekere-na 15 nkeji.Na-agaogologo oge karịa 45 nkeji bụ 12 pasent na oge ahụ, na 90 nkejiotu-ụzọna-agadị pasent 64 karịa nke 1990. Ogologo oge gịibughari, obere oge ị nwere maka ezinụlọ, ndị enyi, mmega ahụ na nri na-edozi ahụ — ọ dịkwa njọ maka ọnọdụ ọgụgụ isi gị.
Kedu ihe ịnyịnya ígwè na-enyere gị aka?
Cygba ígwèemeziwanye ike, nguzozi na nhazi. O nwekwara ikeEnyemakaiji gbochie ọdịda na mgbaji ọkpụkpụ. Nya aigwe kwụ otu ebebụ ezigbo ụdị mmega ahụ ma ọ bụrụgịnwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, n'ihi na ọ bụ mmega ahụ na-enwe mmetụta dị ala nke na-etinye nrụgide dị nta na nkwonkwo.
Kedu ihe ị na-ekwesịghị iyi mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
1. ZereNa-eyiJeans. Jeans dị ukwuu, manaọ bụghịmakaịgba ígwè. The seams bụ mgbe oké, ike, na pịa nri ebe ị na-achọghị ka ha mgbe naigwe kwụ otu ebesadulu.
Gini mere ndi igwe ji eji akwa uwe?
You na-eyi undies n'okpuru obere igwe kwụ otu ebe?
Iwu # 1 -ị na-emeBGH.eyinke giuwe ime n'okpuru obere uwe. Inwe otu uzo owuuwe imen'ime gịgba ígwènegates niile nke elele nyere (esemokwu njikwa, mmiri management). Ọ bụrụgịnwee akwụkwọnịịkama obu bibmma, gịịgba ígwèjersey na-aga n'ihu eriri eriri, ọ bụghịn'okpuru. g.
You nwere uwe maka ịnyagharị igwe kwụ otu ebe gị?
Nchegbu ọzọ nke ọtụtụ ndị nwere ike ibugharị igwe kwụ otu ebe nwere metụtara uwe maka ịda njem bụ ihe ị ga-eme mgbe enweghị mmiri ozuzo na-arụ ọrụ. Ọ bụ eziokwu na-adịghị mma nke ịkwagharị na-arụ ọrụ site na igwe kwụ otu ebe na, ma ọ dịkarịa ala n'oge ọkọchị, ị ga-enwerịrị ọsụsọ.
Kedu ihe m ga-eyi iji rụọ ọrụ na jaket igwe ịgba ịnyịnya?
Egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè bụ ihe nwere ebumnuche niile nwere ike jikọtara ya na uwe zuru ezu ma ọ bụ uwe ọrụ gị - cheta ịzụta jaket buru ibu buru ibu ka o wee nwee ike dabara uwe gị.
Kedu ihe m ga-eyi maka mgbe m na-aga ọrụ?
N’akụkụ ahụ gị ndị ọzọ, uwe ọ bụla i kpuchiri nwere ike ịrụ ọrụ - ọ bụ ezie na ị nwere ike ịgbanwe mgbe ị rutere n’ọfịs gị kpụ ọkụ n’ọnụ. Yiri uwe n'okpuru uwe ogologo ọkpa gị na akwa baselayer n'okpuru uwe elu gị ma ọ bụ akwa ajị anụ n'okpuru jaket gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye ihe mkpuchi ihu ma ọ bụ olu n'olu gị iji mee ka ntì gị ghara ịjụ oyi.